imoto yesimanje akuyona nje izindlela zokuthutha abantu. ubuchwepheshe ezintsha isihambile kude ukuze manje izimoto anemisila hhayi kuphela umsakazo, sicophamavi noma i-DVD-player. Abakhiqizi silwele ukuhlomisa imoto esiphezulu: GPS-Itilosi, DVR, radar umtshina ... Ngamafuphi - ngezimoto yesimanje abe izinto amawaka, omncane ezenza imoto elawulwa ukhululekile futhi ukugibela - induduzo.
Namuhla, akukho muntu uyoba umangale kwesibuko ngekhamera kanye qapha. Isikhathi esining impela zonke izinhlobo "amagajethi" nomkhiqizi linamathele esibukweni esimenza abone into engemuva. Yonke indawo, ehlanganisa ikhamera, yokwethula inkulumo qapha ekhethekile (i-evame ukusetshenziswa kakhulu LCD Abaqaphi nge touch iphaneli). Ngokuvamile langemuva-buka esibukweni sifakwe njengoba amatilosi futhi DVRs. Kukhona futhi onobuhle, ezakhiwe kumadivaysi amaningana ewusizo.
Yiqiniso, lezi izibuko jikelele - into hhayi ezishibhile. Ngezinye izikhathi eyodwa kuphela DVR kuya ezingemuva-buka esibukweni kungadla esilinganayo njengoba ukhetho isabelomali multifunction izibuko. Ngakho khumbula ukuthi ukuthenga eyodwa esibukweni kunothile izici bayokhululwa kunoma isiphi isimo ezishibhile ukuthenga kumadivaysi amaningana ngokwehlukile.
esibukweni esimenza abone into engemuva nge DVR. Kuyini ukusetshenziswa?
DVR ezakhelwe esibukweni ngemuva, wathwebula konke okwenzekayo emhlabeni imoto. Njenganoma DVR ezivamile, le divayisi kungasiza ezimweni eziphuthumayo impikiswano. Ezinye amamodeli we izibuko ezifana kungenziwa eziqhutshwa ngisho nalapho imoto ayivulwanga. Isiqophi ukuqopha ne off ukuthungela oyokwenziwa hhayi isikhathi eside kakhulu - amahora mayelana nengxenye. Nokho, le ntengo isazoba ukukunika isiqinisekiso imoto ukuphepha. Ngakho ukuthi ezinjalo ezithuthukisiwe ezingemuva-buka esibukweni ngeke kuphela ukwenza imoto ukusebenza ngokunethezeka, kodwa futhi unakekele ukuphepha kwakho.
Olunamagama nge itilosi futhi "Radar"
Asinakusho ukuthi i-GPS-Itilosi - into Irreplaceable emotweni. Nokho, ngokuvamile, le divayisi ewusizo siwusizo kakhulu, isibonelo, uma uvakashela umuzi engajwayelekile. Ngakho-ke, abakhiqizi bayanda amatilosi ifakwe ngqo ezingemuva-buka esibukweni. Njengoba umkhuba ubonisa, kulula kakhulu.
Kuyinto evamile nokuba ngempela okuthiwa "Radar" noma kubafuni. umsebenzi wabo pre-ukuxwayisa umshayeli bathandaze amaphoyisa womgwaqo we State kanye radars alinganisa isivinini ezandleni zakhe. Isimo OFF a "radar umtshina" ifana evamile ezingemuva umbono esibukweni, lapho indawo elilinganisiwe radar uboniswa esikrinini. Kufanele kuqashelwe ukuthi ngezinye izikhathi ezinjalo udaba Isobho idatha olunembile kakhulu, ngisho ngokungagwegwesi okungalungile. Kodwa, noma kunjalo, uma uthanda polihachit, kungcono ukwenza iphutha bese ukuthenga leli thuluzi ukuze imoto yakho.
Ukuphathwa Ikhaya osteoarthritis - isimiso 'Ingabe lutho olubi! "